CUNNOOYINKA SALAD GIRIIG AH OO LEH KAABASHKA SHIIDAN - CLASSIC, OO LEH JIIS, DIGAAG, QASHIN IYO YAANYO: TALLAABO TALLAABOOYIN KARINTA, HALABUURKA IYO SAWIRKA, SIFOOYINKA SAXANKA - BEER CAGAARAN
Salad Giriig ah oo fudud oo dhadhan leh leh Kaabashka Chinese: qariirad caadi ah iyo 3 xulasho sida loo kala sooco
Salad Giriig ah oo cad oo udambeeya leh kaabash Shiine ah waa fursad aad adigu naftaada u cuntid cunto fudud oo aan caadi ahayn. Khudradda khudradda dhaqameed ee dhirta leh waxay noqon doontaa mid aad u fiican oo dhadhan fiican leh.
Qaar ka mid ah martigaliyeyaashu si dhab ah uma diiriyaan salad Giriig ah oo leh kaabajka Chinese, iyagoo ku doodaya in aysan jirin wax adag oo isku dhafan qajaarka iyo yaanyada, taasoo keentay saxan.
Dabcan, bayaankan oo kale maahan mid sax ah, sababtoo ah salaatada noocaas ah waa in loo diyaariyaa oo keliya iyadoo la raacayo qadarka, iyaga oo ogaanaya waxyaabahaan ama waxyaabo kale, tusaale ahaan, jiiska jilicsan, saliidda iyo saliida dabiiciga ah ee dabiiciga ah ayaa loo isticmaalaa si loo sameeyo.
Waa maxay saxankaan?
Salad Giriig ah waa saxan iyo caafimaad leh oo ka kooban khudrado, saytuun iyo jiis.
Tilmaamaha soodhawrka waa in gooyaa khudaarta waa in lagu sameeyaa qaybo badan, kaliya markaa waxaad dareemi kartaa dhadhanka gaarka ah iyo carafka walax kasta.
Halabuurka aasaasiga ah
Wixii diyaarinta salad caadi ah waxay u baahan doontaa waxyaabahaas:
cusbo, basbaas ay u dhadhamiyaan;
Si aad u hesho daaweyn sarreysa, ma aha lagama maarmaan in la iibsado ladhanka, waxaa fiican inaad sameyso saladh Giriig ah oo leh kaabajka shinnida laga soo saaro badeecooyin sahlan, waxaanu horeyba kuugu siinay cunto karis ah.
Maxaa beddeli kara maaddooyinka caadiga ah?
Xilliyada jadwalka inta badan, Jooniska Feta waxaa lagu beddelayaa maraqa soy - Tofu. Haddii aysan jirin yaanyo yaryar oo ku yaal gacanta, markaa waxaa lagu beddeli karaa yaanyada caadiga ah, yaanyada caadiga ah.
Haddii aad doonayso inaad ku karsato salad Giriig ah, oo aan ku xadgudubin tiknoolajiyada, waxaa lagula talinayaa inaadan bedelin maaddooyinka ka mid ah saxan. Ma beddeli kartid farmaajo faleebo leh jiis, maaddaama dhadhanku si buuxda u kala duwanaan doonto.
Faa'iidooyinka iyo waxyeellada suxuunta
Salad Giriig ah ayaa lagu gartaa fududaynta karinta, laakiin waqti isku mid ah waa faa'iido badan, sababtoo ah waxa ku jira maaddooyinka dabiiciga ah, oo aan lahayn noocyo kala duwan. In kasta oo xaqiiqda ah in saxan yahay iftiin, waa nafaqo, sidaas darteed waa mid ku haboon ma aha oo kaliya sida fudud, laakiin sidoo kale casho fudud.
Caanaha Feta waxay caan ku tahay tones jirka, taasoo keentay in kor u kaca xaaladda guud ee bukaanka.
Tufaaxu wuxuu hagaajiyaa nidaamka dheef-shiidka. Khubarada ayaa sheegaya in isticmaalka joogtada ah, waxaad ka takhalusi kartaa dhibaatooyinka sida caloosha iyo shubanka. Haddii qofku doonayo in uu ka saaro miisaanka xad-dhaafka ah, laakiin uusan dooneynin in uu lumiyo walxaha muhiimka ah ee bini-aadannimada, Saladh Giriigtu waa mid ku habboon sababtoo ah waa kaloori-yare, iyo la'aanta hilibka hilibku waxay keenaysaa nuugista si fiican ee caloosha.
Cuntada ayaa runtii hodan ku ah fiitamiinada, nafaqooyinka, macdanta, sidaa daraadeed, hudheello kasta ayaa ku qanacsan.
Talaabo sahlan oo ay ku qaadato raashinka talaabada ah
Waxaa jira cuntooyin kala duwan oo salad Giriig ah, oo ay ka mid yihiin kaabajka Chinese, mid kastana wuxuu u qalmaa fiiro gaar ah.
Wixii diyaarinta salad caadi ah waxay u baahan doontaa qaybahaas:
basbaas macaan - 1-2 qaybood;
laba yaanyo cusub ee cabbirka dhexdhexaadka ah;
200 garaam oo ah kaabajka Shiinaha;
150 garaam oo jiis ah;
100 garaam oo geedo madow ah oo la duubay;
3-4 qaado oo saliid saytuun ah;
1-2 qaado oo ah liin;
Markaad diyaarisay dhammaan qeybahaas aad u baahan tahay si aad u sii wado ficiladaas.:
Dhammaan khudaarta si fiican u dhaq.
In weel gaar ah isku dar dabiici ah iyo saliid saytuun ah. Halkaas, waa inaad isla markiiba ku shubtaa dhirta iyo milixda.
Tamaandhada waxay u baahan yihiin in ay jaraan jinsiyada, ka dibna u kala qeybso qeyb kasta oo dhan sagaal qaybood, taas oo ka dhalatey taas oo aad ka heli kartid xabo oo isku mid ah.
Sida basasha, waa wax caado ah si ay u gooyaa si toos ah galay siddooyin, iyo haddii la doonayo, waxaa sidoo kale lagu gooyaa karaa siddooyinkii kala badh.
Kaabashka hilibka iyo basbaaska macaan ayaa la jarjaray.
Saytuunku waa laga wada tagi karaa, laakiin haddii ay jirto rabitaan, waa la gooyaa karaa kala badh, halkan wax kasta waxay ku xiran tahay rabitaanka shakhsi ahaaneed, saytuunka cagaaran kuma habboona saxanka.
Feta waa la jarjarey, oo isku mid ah cagaarka. Haddii loo baahdo, waxaad ka iibsan kartaa dukaanka hore ee la kariyey.
Waxay ku sii jirtaa in khudradda lagu daro baaquli salad ah, oo isku dhafan.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyowga ku saabsan sida loo karsado salad dhexdhexaad ah Giriig:
Diyaarinta saladhka laga helo jiiska feta waxay u baahan tahay qaybahaas:
Cherry - 8-10 gogo ';
150 garaam oo farmaajo ah;
Markaad diyaariso dhammaan qaybaha aad u baahan tahay si aad u fuliso ficiladaas.:
Waa lagama maarmaan in la dhaqo khudradda, qalajiyo iyaga oo qalalan, jarjarida midhaha tamaandhada ee xabadaha, iyo sidoo kale qajaarka.
Marka dhan khudradda ay diyaar u yihiin, waxaad u baahan tahay inaad ku rido baaquli saladh, qurxinta saxanka, caleemaha caleenta, ku dhajinta xabadaha farmaajada sare.
Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso dharka, waxaa loo tixgeliyaa in ay tahay qaybta ugu weyn ee dhadhanka saxda ah ee guud ahaan ku xiran. In baaquli aad u baahan doontaa inaad ku shub saliid saliid, ku darayo basbaaska dhulka madow, basil la qalajiyey, walaaqaya wax kasta oo si fiican.
Ku dar milix laguma talin, sababtoo ah farmaajo iyo sidaas oo kale waa jiiska.
Waxaan soo bandhigi doonaa daawashada fiidiyo ku saabsan sida loo kariyo salad Giriig ah oo leh jiis:
Iyada oo digaag iyo yaanyo
Si loo abuuro saladh waxay u baahan tahay qaybaha soo socda:
Diyaarinta maaddooyinka aad ka bilaabi karto cunto karinta:
Waxaad u baahan doontaa inaad dhaqdo digaaga digaaga, ka saarista dufanka, hilibka ku shubaya qaybaha yar yar. Waxaad soo karin kartaa, sida liin, iyo saliid saytuun ah, waxay dhammaan ku xiran tahay doorashada shakhsi ahaaneed. Ka dib markaad mashiinka lagu dhammeeyey, waxaad u baahan tahay inaad ka qaaddid hilibka bac caag ah qaboojiyaha ilaa lix saacadood.
Waqtigan xaadirka ah, marka digaagga la kariyo, waxaad u baahan tahay inaad ku shubtid digsi, waxaad isticmaali kartaa kariyaha gaaban. Marka hilibka gebi ahaan la qaboojiyey, waxaad bilaabi kartaa inaad ku mashquuliso khudradda, iyaga oo u googooyo qaybo waaweyn, sida xaaladaha kale.
Qaybaha noocan oo kale ah ayaa loo baahan yahay.:
rootiga madow ee madow - 150-200 garaam;
First of dhan, qashinka waxaa loo diyaariyey. Digaagista rooti madow oo la kariyey, ku faafi xaashida dubista, rusheynta subagga, ka dib markaad u diri kareyso foornada 10 daqiiqo.
Dhammaan khudradda waa la jarjarey.
Marka dhammaan khudaarta lagama maarmaanka ah la diyaariyo, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad ku daro maaddooyinka, ku rushaynta sheylada, waxaadna si ammaan ah ugu adeegi kartaa miiska.
Sida loo adeego?
U adeegida suxuunku maaha wax ka madax banaan oo muhiim ah marka loo eego diyaargarowga. Dhammaan tani waxay ka dhigan tahay in lagugula talin karo in aad barato qaar ka mid ah waxyaalahan soo socda ee arrintan si aad u qadariso dhadhanka cajiibka ah ee saxda ah ee cuntada.
Khamriga caddaanku wuxuu u fiican yahay saxanka, iyo haddii aad sidoo kale aad u leexatid laambad xoog leh oo bedeli doonta qorraxda, markaa waxaad dareemi doontaa gebi ahaanba Giriiga, cunista salad delicious iyo kareysa.
Waa in la ogaadaa in saxankani yahay mid aad u caan ah oo aan ahayn Giriigga, laakiin adduunka oo dhan, siday u kala horreeyaan, waxay u adeegeen dhammaan makhaayadaha casriga ah.
Sida caadiga ah Salad Giriig ah waa cunto fudud oo la adeegsado on saxanka kulul., tusaale ahaan, diyaariyey kalluunka, hilibka. Haddii jadeecada loo isticmaalo mid ka mid ah maaddooyinka, ka dibna ogow in marka la isku darayo salad, waxaad ogaan kartaa sida ay u bilaabmayso kululaynta, cagaarka bilawdo inuu lumiyo qaab.
Haddii aad u diyaariso buuggan sida habka jimicsiga ee ka soo jeeda Giriigga, xitaa goryaankii ugu dhaqsaha badan iyo kuwa kaleba waxay ku sii jiri doonaan aragtida ugu culus.
Hadda qof kastaa wuu ogyahay Salad Giriig ah waa cunto macquul ah iyo saxan caafimaad leh., oo ay ka mid tahay oo keliya maaddooyinkaas aan awood u lahayn in ay saameyn ku yeeshaan caafimaadka, sidoo kale, waa xalka weyn ee kuwa ku jira cuntada.